ဒီတစ်ခါ တိုင်းပြည်ခြောက်ထဲ မကျနိုင်တော့ဘူး
( 26 June 15 ) ﻿
Read more	တရုပ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ လက်ရှိ စစ်အစိုးရကို ဆက်လက်ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းချင်မည်ဟု ထင်ပါသလား
( 16 June 15 ) ﻿သူပုန်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အစွန်အဖျားမှာ နေတာဖြစ်လေတော့
တရုပ်နယ်စပ်မှာ ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေက ဖြစ်နေမှာပဲ။ အဲဒီလိုအစိုးရနဲ့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်နေရင် ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေဦး
မှာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး...	Aung Khin
Read more	အစိုးရနဲ့ တရားဥပဒေကို သိပ်ကို ရွံသွားပြီ
ကိုထင်လင်းဦးမှားသည်။လုံးဝမှား ပါသည်။ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ကျခံရသည်အထိ မှားပါသည်။
ကိုထင်လင်းဦးက မဘသ တွေထောက်ခံနေတဲ့ စစ်အုပ်စုလို သံဃာတော်တွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့ ဦးအောင်မထုနိုင်ခဲ့ဘူး။	မေမွန်း
Read more	The Voice ရဲ့ လာရာနဲ့ လားရာ
( 23 April 15 ) ﻿
The Voice ရဲ ့အစ-
Living Colour က-
Living Colour အစ-
ပြီးတော့ ခင်ညွှန် ့သား -
ကက(လှမ်း) က ဗိုလ်မှုးသန်းနိုင်	ပွ ပွ ကြီး
Read more	ဖမ်းမိ တရုတ်ကြေးစား စစ်သားများကို သေဒဏ်ပေးရဲသလား?
( 27 February 15 ) ﻿
ဘယ်နှစ်လောင်း ဒဏ်ရာဖြင့်က ဘယ်နှစ်ယောက် ပြောခဲ့ပြီး တဖက်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်နေတာကိုလည်း မိမိတို့ စိစစ် တွေ့ရှိရပြီး သက်ဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးကနေတဆင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး မူဘောင်အရ ဂိုလ်ရှယ်လေး
Read more	ဦးသိန်းစိန်၏ ထူးခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များ
---ဝန်ကြီးချုပ်ဘဝ ကပင် ... ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်း၌ ဘုရား သားတော်များအား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ထောင်ချခြင်း၊
--သမ္မတ ဘဝ ရောက်ပြန်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံး အကြမ်းဖက်မှုများစွာ ၊ လူသား အသက်ပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်ဆီးရခြင်း ၊ အိုးအိမ်များစွာ ပျက်ဆီးရခြင်း ၊ ဘရန်ဆိုင်း Read more	သိန်းစိန်ကြီးက ရိုးရှာတယ်
( 22 January 15 ) ﻿
ပါးစပ်သရမ်းပြီး ဆေးစွဲနေတဲ့ အရည်းကြီးကိစ္စ - အဲဒီ အရည်းကြီးကိုပဲ တစ်ခါတည်း ထိုးကျွေးလိုက်ရမလား .. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်မှာ ပြသနာ ရှာဖို့ အသုံးဝင်နိုင်သေးတာကြောင့် မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်ရမလား	ကိုထိုက်)
Read more	လက်ပံတောင်းတောင် သတ္ထု သိုက်မှာ ကြေးနီအကြောင်းပြ၍(ရွှေ ၆၀၅.၉၈ တန်၊ငွေ ၃၀၂၉.၉ တန်)ကို ခိုးယူထုတ်လုပ်ဘို့ ကြံနေ
( 8 January 15 ) ﻿
နှစ်(၃၀)ဖြင့် ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်မည့် စီမံကိန်းအား (၁၉) နှစ် ဂရန်တီ ဖြင့် ယာယီကြိတ်ခွဲစက်ရုံကို တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုခြင်းဟာလည်း သွေရိုးသားရိုး ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား? သေချာတာတစ်ခုကတော့ Ivanhoe ကုမ္မဏီတွတ်ချက်မှုအစီအရင်ခံစာ ပါ လက်ပတောင်းတောင် သတ္ထု သိုက်မှာ ( ရွှေ ၆၀၅.၉၈ တန်၊ ငွေ ၃၀၂၉.၉ တန် )
ကို ခိုးယူထုတ်လုပ်ဘို့ ကြံနေတဲ့သဘောပါ၊	Thiri Pyae Sone
Read more	ကျနော်ကိုယ်တိုင်အကျဉ်းကျပြီမို့ အကျဉ်းသားမစောင့်ရှောက်တော့ပါ။
( 20 December 14 ) ﻿
စစ်ခွေးတွေ ဟပေးတဲ့ဂယ်ပေါက်ကနေ အထုတ်ကလေးပိုက်ပြီး
ပြည်တော်ပြန်သွားတဲ့ငတိပေါ့.. ဘယ်လောက် နိုင်ငံရေးပြင်းထန်သလည်း တော ့မမေးနဲ့
စောင့်ရှောက်စရာ အကျဉ်းသားမရှိတော့ ရင်ခွင်ပိုက် စောင့်ရှောက်မဲ့
သူရှာလေသလား မပြောတတ်ပါ၊	ကိုကိုဦး(သူပုန်မျိုးဆက်)
Read more	လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
(4December 14 ) ﻿
အမေရိကန်အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ FORTUNEမှ ဘာသာရေး လူမှုရေး စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်အားလုးံထဲမှ 2014ခုနှစ်အတွက် "အကြီးကျယ်အခန်းနားဆုးံ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ၅၀" ကို စာရင်းပြု စုမှု ထွက်ပေါ်လာ	Htoon Htoon Lwin